Momba anay - Dongguan Vanhe Modular House Limited
Trano fitoeran-javatra fivoriambe
Trano fitoeran-javatra azo itarina
Trano fonosana fonosana fisaka
Trano fitoeran-kazo mandahatra
Trano akoho amam-borona
Trano firafitra vy
Trano vita mialoha
Toeram-panasana tanana azo entina tanana
Horonantsary Trano Container
Horonan-tsary firafitra vy
Lahatsary am-borona poultry
Horonan-tsary ao anaty tranon'ny fitoeran-kazo
Horonan-tsary fidiovana azo entina
Dongguan Vanhe Modular House voafetra
dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, ny famokarana, ny varotra ary ny fanamboarana ireo trano efa vita. Niorina tamin'ny taona 2012, DONGGUAN CITY, dia manohy manatanteraka zava-bita ary lasa mpanamboatra serivisy sinoa lehibe indrindra miaraka amin'ny haitao mandroso amin'ny trano efa vita.
Miaraka amin'ny ekipa miasa mafy sy ny atmosfera miasa mirindra, ny vokatrao dia tonga lafatra sy mihabe isan-karazany, tsy tsara tarehy fotsiny, fa azo ampiharina amin'ny faritra maro koa. Nahazo famatsian-tsakafo tokana isika manomboka amin'ny famolavolana, famokarana, fananganana hatramin'ny marketing.
Hatramin'izao, VANHE dia nahavita nanolotra tetik'asa trano efa vita aman'arivony marobe any amin'ny firenena maherin'ny 100, ao anatin'izany ny fandrindrana ny lasy, ny famolavolana trano, ny famokarana indostrialy, ny fitaterana, ny fametrahana eo an-toerana, ny haingon-trano anatiny, ny toeran'ny toby, sns. VANHE dia nahazo dera lehibe avy amin'ny mpanjifa noho ny kalitaon'ny vokatra tena tsara, ny haitao mahatalanjona amin'ny asa fanamboarana ary ny serivisy aorian'ny fivarotana. Noho ny fanandramana manan-karena am-polony taona maro momba ny fanamboarana trano efa vita fanaraha-maso ary koa ny fanangonana politikam-pirenena, lalàna, fomba amam-panao, kolontsaina ary toetrandro izay misy fiatraikany am-pilaminana ny tetikasa, VANHE dia nitarika ny fananganana trano vita amin'ny trano vita sinoa ho an'ny jina sinoa ary nanjary mpamatsy ankafizin'ny ireo orinasam-pananganana sinoa lehibe fanta-daza.
Ny sary eo ankavanana dia tetik'asa niarahanay niasa nanerana an'izao tontolo izao tato ho ato. Raha mahaliana anao dia azonao atao ny manindry raha hijery azy ireo
Ho an'ny zava-bita, VANHE tsy afa-po. Izy io dia mitazona hafanam-po avo lenta hatrany amin'ny fianarana, manome lanja lehibe ny paikady fampandrosoana maharitra sy ny fifanakalozana ary mianatra mavitrika amin'ireo mpiara-miasa lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nanomboka tamin'ny taona 2012 ka hatramin'izao, hatramin'ny nahaterahany tsy fahita ka hatramin'ny manana ny voninahiny ankehitriny, nanomboka tamin'ny fiandohan-dàlana hatramin'ny fampandrosoana mandroso, ny olona VANHE dia nanao làlana tsy mahazatra misy fanavaozana sy fampandrosoana. Fa ny tsy fivadihana dia ho fanoloran-tena tanteraka ho an'ny mpanjifa. Ankoatr'izay, fanahin'ny orinasa io.
Ny firindrana valo taona dia manangana empira sy zato tsy fivadihana manome ny hatsarana. VANHE, mpitatitra fiaramanidina an'ny indostrian'ny trano fonenana sinoa, dia hitarika ny fampandrosoana indostrialy ary hanoratra toko vaovao amin'ny orinasa.
Te-hanampy lanitra amin'ny fanirianao?
Mifandraisa aminay anio raha mila consultation momba ny famolavolana.
Fanontaniana tonga soa
Valio haingana araka izay tratra ianao